ny avy eo anivon’ny komitin’ny fampihavanana Malagasy fa mbola ho lavitra ny lalana hahatongavana amin’ny tena fampihavanana. Mbola toy ny nataon’ny teo alohany hatramin’izay ihany no hita hotontosain’ny fitondrana ankehitriny. Valifaty politika no tena hita ho mibahana ary mamofona ihany koa ny vao mainka fanerena ny demokrasia amin’ny alalan’ny fikasana hanakatona haino aman-jery maro aorian’ny 10 jolay izao. Toa lasa nivadika ho vono HVM sy ny mpiaradia taminy ilay vina IEM nentin’ny filoham-pirenena nikaotiana ny vahoaka tamin’ny propagandy. Nosamborina tsikelikely ireo mpiaradia akaiky ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina toa an-dry Mbola Rajaonah sy Bertin Andriamihaingo ary mbola mitohy ankehitriny mikisaka hatrany Antsirabe ihany satria dia namoahana didy fampisamborana koa moa iny ny depiote lany tamin’ny antoko HVM teo aloha, Nirina Ravelohanitra. Horinganina ao anatin’ny 5 taona ve izany ireo akaiky ny filoha teo aloha, Hery Rajaonarimampianina ?